जापानमा Best उत्कृष्ट शरद vesतु पाल्ने ठाउँ! Eikando, Tofukuji, Kyomizudera ... - Best of Japan
शरद parkतु पार्क मा लकड़ी पुल, जापान शरद seasonतु को मौसम, क्योटो जापान = शटरस्टक
जापानमा, तपाइँ सेप्टेम्बरको अन्तदेखि डिसेम्बरको शुरुमा सुन्दर शरद पातहरूको आनन्द लिन सक्नुहुन्छ। शरद leavesतु पातहरूको उत्तम मौसम सम्पूर्ण स्थानमा पूर्ण रूपमा भिन्न हुन्छ, त्यसैले कृपया जापानको यात्राको क्रममा सबैभन्दा सुन्दर ठाउँ खोज्ने प्रयास गर्नुहोस्। यस पृष्ठमा, म जापानको विभिन्न भागहरूको पत्तल ठाउँहरू प्रस्तुत गर्दछु। प्रत्येक नक्सामा क्लिक गर्नुहोस् Google नक्सा एक अलग पृष्ठमा प्रदर्शन गर्नका लागि।
मेटासेकोइया एवेन्यू (ताकाशिमा शहर, शिगा प्रान्त)
Eikando Zenrinji मंदिर (क्योटो)
तोफुकुजी मन्दिर (क्योटो)
मियाजीमा (हत्सुकाइची शहर, हिरोशिमा प्रान्त)
होक्काइडो, जापान = शटरस्टकमा डेसेट्सुजन पहाडमा शरद oliतु
जापानमा प्रारम्भिक पातहरूमा शरद alतुको पात शुरु हुने क्षेत्र होक्काइडोको डाइसेत्सुजन हो (जसलाई टेसेट्सुजन पनि भनिन्छ)। डेइसेट्सुअन एक धेरै फराकिलो हिमाली क्षेत्र होक्कैडोको बीचमा अवस्थित छ, यसलाई राष्ट्रीय पार्कको रूपमा तोकिएको छ। डेसेट्सुजानमा माउन्ट सहित २००० मिटर वरपर उचाइका पहाडहरू छन्। Asahidake (उचाई २,२ 2000 १ मिटर), माउंट हाकुन्डके (२,२2,291० मीटर), माउंट कुरोडके (१, 2,230 1,984 m मिटर) हिमालको फेदीमा त्यहाँ स्पा शहरहरू छन् सौंकायो (माउन्ट कुरोडाके नजिक), असिडाके ओन्सेन (माउंट असहिदाकको नजिक)।
डेसेत्सुसानमा, शरद पातहरू अगस्टको अन्तमा पहाडहरूको शिखरबाट शुरू हुन्छन् (पर्वतमा रूखहरू नभएका पहाडहरू छन्)। सेप्टेम्बरको शुरुमा पहाडहरूको शिखर रातो रंगमा रंगनेछ। मध्य सेप्टेम्बरमा शरद theतु पहाडहरूको बीचमा छोडिन्छ। सेप्टेम्बरको अन्तमा, राम्रा शरद atतु पातहरू पहाडहरूको फेदमा पनि देखिन्छ, र शिखरमा हिउँ पर्न थाल्छ।
त्यहाँ असंख्य स्थानहरू छन् जहाँ शरद leavesतुका पातहरू डेसेत्सुसानमा सुन्दर छन्। ती मध्ये, माउन्ट, असिडाके र माउन्ट, कुरोदेक ती व्यक्ति हुन् जुन म तपाईंलाई सिफारिश गर्न चाहन्छु एक ठाउँमा जहाँ तपाईं सजिलै रोपवेको अन्तरालमा जान सक्नुहुन्छ। यी दुई मध्ये, यदि मैले या त छनौट गरे, म माउंट, असाहिदाके छनौट गर्नेछु जुन माथिको फोटो र भिडियोहरूमा देख्न सकिन्छ।
माउ.असहिदाके डाईजेट्सुजानमा सब भन्दा अग्लो पहाड हो। पहाडको फेदमा रोपवे प्लेटफार्ममा पुग्न आवश्यक समय कारबाट बीइईबाट minutes० मिनेट, निलो पोखरीबाट १ घण्टा र फुरानोबाट १ घण्टा minutes० मिनेटको दूरीमा छ। रोपवेको विन्डोबाट (प्रत्येक तरिका १० मिनेट) तपाईं भव्य शरद leavesतु पातहरूको दृश्यको आनन्द लिन सक्नुहुनेछ। रोपवेको माथिबाट, माथिको चलचित्रमा देखिने सुगातामी पोखरीको हिड्ने मार्ग कायम गरिएको छ। हिड्ने बाटो लगभग १.40 किमी / ल्यापमा छ। तपाईं एक घण्टाको लागि पैदल यात्राको मजा लिन सक्नुहुन्छ। रोपवेको माथिबाट यस पैदल आनन्द लिनु यो कोर्सको ठूलो अपील हो। विवरणका लागि, कृपया निम्न साइटहरूमा सन्दर्भ गर्नुहोस्।
यस बीच, माउन्ट कुरोडके तुलनात्मक रूपमा सुउन्कोइको नजिक छ, एक प्रसिद्ध स्पा शहर। एक रोपवे (way मिनेट प्रत्येक तरिका) Sounkyo बाट चलिरहेको छ। रोपवेको माथिकोबाट तपाईं अर्को लिफ्टमा सवारीमा जान सक्नुहुन्छ। यस कोर्सको साथ पनि, तपाईं भव्य शरद umnतु पातहरूको आनन्द लिन सक्नुहुनेछ।
दुबै पाठ्यक्रमहरू शरद पातमा धेरै भीड हुन्छन्। त्यसो भए कृपया रोपवेको स्टेशनमा सकेसम्म चाँडो पुग्ने योजना बनाउनुहोस्।
>> Daisetsuzan Asahidake रोपवेको आधिकारिक वेबसाइट यहाँ छ
माउन्टको आधिकारिक साइट कुरोडके रोपवे निम्नानुसार छ। यस साइटको माथिल्लो दायाँमा भाषा चयन गर्न एक बटन छ, कृपया त्यहाँ अंग्रेजी चयन गर्नुहोस्।
>> डेसेत्सुसान कुरोदेक रोपवेको आधिकारिक वेबसाइट यहाँ छ
Oirase स्ट्रिम यसको सुंदर शरद colorsतु र colorsहरू = AdobeStock को लागि परिचित छ
Oirase धारा होन्शुको उत्तरी भागमा Aomori प्रान्त मा अवस्थित छ। यो प्रवाह तवाडा तालबाट उत्तर पूर्वमा बग्नेछ। तालबाट करीव १ 14 किलोमिटरको दायरा (उचाई भिन्नता २०० मिटर जति छ) लाई Oirase स्ट्रिम भनिन्छ। Oirase धाराहरु सुन्दर जंगल को माध्यम बाट बगिरहेको छ, असंख्य साना झरना धेरै सुन्दर छन्। तपाईं स्ट्रिमको साथमा घुमाउरो लिन सक्नुहुन्छ। शरद Inतुमा जंगल रातो हुन्छ, त्यसैले तपाईं उदेकका दृश्यहरूको आनन्द लिन सक्नुहुन्छ। स्ट्रिमको शीर्षमा, शरद पातहरू अक्टुबरको सुरूमा सुरू हुन्छ। अक्टुबरको मध्यमा शरद peakतु छोडिन्छ। डाउनस्ट्रीम साइडमा, शरद पातहरू अक्टोबरको पछिल्लो देखि नोभेम्बरको सुरूमै देख्न सकिन्छ।
जब Oirase स्ट्रिम भ्रमण, तपाईं तलबाट अपस्ट्रीम को हिड्नु पर्छ। त्यसो भए तपाईले पानीको बहालीलाई अझ राम्ररी बुझ्न सक्नुहुन्छ। बर्षको पर्खाल कोमल छ। यो सबै १4किलोमिटर हिंड्न -5-। घण्टा लाग्छ। किनकि बस पहाड स्ट्रिमको साथ सञ्चालित छ, तपाईं बस राम्रोसँग प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ र केवल केही अंश हिंड्न सक्नुहुन्छ।
यसले JT शिन-अओमोरी स्टेशनबाट २ घण्टा लिन्छ र १ घण्टा minutes० मिनेट JR Hachinohe स्टेशन बाट Yakeyama जो Oirase धाराको सुरूवात (डाउनस्ट्रीम) हो। होशिनो रिसोर्ट Oirase स्ट्रिम होटल Oirase स्ट्रिम मा अवस्थित लोकप्रिय छ, त्यसैले यदि तपाईं रहनुभयो, यो छिटो बुक गर्न राम्रो छ।
विवरणको लागि, कृपया निम्न साइटमा सन्दर्भ गर्नुहोस्।
>> अओमोरी प्रान्त, पर्यटन र अन्तर्राष्ट्रिय मामिला रणनीति ब्यूरो
>> Hoshino रिसोर्ट्स Oirase केरियु होटल
मकिनो, टाकाशिमा, शिगा, जापान = शटरस्टकमा मेटासेक्वाइया रूखहरू
मेटासेकोइया एवेन्यूको नक्शा
मेटासेकोआको रूख एकदम अग्लो र सुन्दर छ। त्यहाँ त्यस्तो स्थान छ जहाँ यस्तो मेटासेक्वाइया सबै सिधा सडकको साथ लाइनमा छन्। मेटासेकोआका रूखहरू १२ मिटर अग्लो छन् र सबैमा .०० छन्। २ tree. km किलोमिटर लम्बाईमा यो रूखले लाइन गरिएको एवेन्यू टाकोशिमा शहर, शिगा प्रान्त, क्योटोको पश्चिममा अवस्थित छ।
यो अव्हेन्यू सुन्दर छ जब तपाईं यसलाई देख्नुहुन्छ, तर म तपाईंलाई सिफारिश गर्दछ विशेष गरी शरद पातहरूमा। शरद तु प्रत्येक क्षेत्र नोभेम्बरको अन्त्यमा यस क्षेत्र शिखरमा जान्छ। यद्यपि यो कारबाट जानु राम्रो छ, तर मलाई लाग्छ कि नजिकको स्टेशनमा साइकल उधारो दिनु राम्रो हो। तपाईं साइकल भाँडामा लिन सक्नुहुनेछ नजिकको जेआर मकिनो स्टेशनमा टुरिस्ट अफिसमा।
किकोोटो जापानमा एकान्डो जेनरिन-जी मन्दिर, रंगीन पातहरूको लागि शरद seasonतुमा परिवर्तन भयो, नक्शा रूखहरूको बगैचा = AdobeStock
Eikando मन्दिर को नक्शा
क्योटोमा धेरै शरद र colors्गका साथ त्यहाँ थुप्रै मन्दिरहरू र मन्दिरहरू छन्। ती मध्ये, एकान्डो मन्दिर शरद leavesतु पातहरु को सबैभन्दा सुन्दर स्थान को रूप मा १००० बर्ष भन्दा धेरै सराहना गरिएको छ।
यद्यपि एकान्डो मन्दिरको आधिकारिक नाम "Zenrinji" हो, यो धेरै पहिलेदेखि यो पदनाम संग लोकप्रिय छ। "आइकन" व्यक्तिको नामबाट आउँदछ जसले यस मन्दिरमा परोपकार काम गर्यो। Eikando मन्दिर क्योटोको पूर्वी छेउमा पहाडको भित्तामा अवस्थित छ। करीव 3000००० नक्शा परिसरमा रोपिएका छन्। यी रूखहरू नोभेम्बरमा चम्किलो रातो बन्छन्। शरद पातहरूको शिखर नोभेम्बरको अन्ततिर हो। त्यस समयमा यो धेरै पर्यटकहरूको भीडले भरिएको छ कि तपाई एकांडो मन्दिरमा पस्नको लागि तपाईले लाइन अप गर्नुपर्नेछ। राती उज्यालो पनि गरिएको छ, र तपाईं शानदार दृश्यहरूको आनन्द लिन सक्नुहुन्छ।
यो Eikando मन्दिरमा बस प्रयोग गर्न सजिलो छ, तर शरद पातहरु को लागी यातायात जाम हुन सक्छ। म सँधै मेट्रोको केज स्टेशनमा जान्छु र त्यहाँबाट हिंड्छु। त्यहाँ धेरै मानिसहरू यस मार्गमा हिंडिरहेका छन्, ताकि तपाईं पहिलो स्थानमा हराउनु हुने छैन। यो आइकान्डो मन्दिर सम्म पैदल मा लगभग २० मिनेट लिन सक्दछ, तर बाटोमा एक प्रसिद्ध नानजेन्जी मन्दिर छ। यो मन्दिर शरद पात पनि धेरै सुन्दर छ। म पहिले नानजेन्जी मन्दिरको सैन-मोन (मुख्यद्वार) को वेधशालामा जान्छु, त्यसपछि त्यहाँबाट शरद पातहरू हेर्नुहोस्। यो Nanzenji बाट Eikando मन्दिर को एक छोटो पैदल दूरी छ।
एकान-डोमा, शरद leavesतुको पातहरूको शिखर नोभेम्बरको अन्तदेखि डिसेम्बरको सुरुतिर हुन्छ। यद्यपि, मलाई लाग्छ कि तपाईं शरद leavesतुको पातहरू रमाईलो गर्न सक्नुहुनेछ यदि तपाईं मध्य नोभेम्बरमा जानुहुन्छ भने पनि। पहिले, म नोभेम्बर १० मा Eikendo भएको छु। त्यस समयमा म्यापल पूर्ण रूपमा रंग भएको थिएन। अझै हरियो, पहेंलो, रातो नक्शाले एक अद्भुत परिदृश्य उत्पादन गर्‍यो। रातोको दृश्य अवश्य नै सबैभन्दा सुन्दर छ, तर विभिन्न रंगका दृश्यहरू पनि उत्कृष्ट छ। यसबाहेक, यो नोभेम्बरको पहिलो आधा मा यति भीड भएको छैन, त्यसैले तपाईं आरामसँग टहल्न सक्नुहुन्छ।
यदि तपाइँ चरम मौसममा एकान्डो मन्दिर जानुभयो भने, तपाइँले सीमामा प्रवेश गर्न लामो समय सम्म लाइन लिन पर्ने हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा म तपाईंलाई सिफारिस गर्दछु कि तपाईले "Eikando Kaikan (Eikando हल)" मा खानुहोस् अगाडि पछाडि। यस हलमा तपाईं दिन र रातमा Kaiseki पकवान खान सक्नुहुन्छ। सत्य भन्नुपर्दा, यहाँको थाल एकदमै स्वादिलो ​​थिएन। जे होस्, यदि तपाईं यो हल प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, तपाईं खान पछि तुरुन्तै प्रवेश गर्न सक्नुहुनेछ, लाइनमा होइन। दुर्भाग्यवस, अ booking्ग्रेजी बुकि sites साइटहरूमा, म यो खाना भ्रमण फेला पार्न सक्दिन। यदि तपाईं होटेल दरबार वा तपाईंको साथीबाट आरक्षण अनुरोध गर्न सक्षम हुनुहुन्छ भने, कृपया यसलाई विचार गर्नुहोस्।
तोफुकुजी मन्दिरको नक्शा
तोफुकुजी मन्दिर क्योटो स्टेशनको दक्षिण पूर्वमा अवस्थित छ। यो JR नारा लाइन वा Kihan ट्रेन को तोफुकुजी मन्दिर स्टेशन बाट लगभग १० मिनेट को दूरी मा छ। टोफुकुजीको छेउछाउमा २००० मानचित्रहरू रोपिएका छन्। तोफुकुजीको शरद पातहरू नोभेम्बरको अन्ततिर पुग्नेछ। डिसेम्बरको शुरुमा पनि, चम्किलो रातो म्यापलका पातहरू भुइँमा अनगन्ती संख्यामा खसेका छन् र यो धेरै सुन्दर छ। शरद leavesतु पातहरूको समयमा, ,10,००,००० पर्यटक टोफुकुजी घुम्छन्, र यो इकान्डो मन्दिर जत्तिकै भीडले भरिन्छ।
तोफुकुजीमा त्यहाँ "सुतेनको" नामको काठको कोरिडोर छ र यस कोरिडोरबाट दृश्यको दृश्य धेरै प्रसिद्ध छ। जे होस्, यो धेरै भीड भएको कारण, मलाई लाग्छ कि तपाइँ चित्रहरू सजिलै लिन सक्नुहुन्न। यदि तपाईं शरद पातहरू बिस्तारै हेर्न चाहानुहुन्छ भने, तपाईं बिहान चाँडो उठ्नुहुनेछ त्यसैले तपाईं बिहान :8: .० सम्म प्रवेशद्वारमा प्रवेश गर्न सक्नुहुनेछ।
क्योटो, जापानको किओमिजु-डेरा मन्दिरमा शरद र Color्ग = शटरस्टक
कियोमिजुडेरा मन्दिर कयोटोको प्रतिनिधित्व गर्ने महान मन्दिर हो जुन किन्काकुजी मन्दिरको प्रतिनिधित्व गर्दछ। यो क्योटोको पूर्वपट्टि पर्वतीय ढाडमा अवस्थित छ र तपाईंले माथिको चित्रबाट क्योटो शहर देख्न सक्नुहुन्छ जुन माथिको चित्रमा देखाइएको छ। साँझमा यो उज्यालो छ र तपाईं शानदार दृश्यको आनन्द लिन सक्नुहुन्छ।
किओमिजुदेरा मन्दिरमा यति धेरै नक्शा छन्, त्यसकारण जब शरद inतुमा मुख्य हल सेटिंगबाट तल हेर्दा, एउटा चम्किलो रातो म्यापल समुद्रको रूपमा फैलिन्छ। धेरै मानिसहरू यस शरद Aतुमा पातहरू हेर्न प्रत्येक शरद Kiतुमा किओमिजुदेराको भ्रमण गर्छन्। किओमीजुदेराको शरद पातहरू नोभेम्बरको अन्तमा पुग्नेछ। किनकी सीमा धेरै फराकिलो छ, तपाईं भीडले साघुँरो महसुस गर्नुहुनेछैन, तर यदि तपाईं शरद पातहरू पूर्ण रूपले रमाउन चाहनुहुन्छ भने, तपाईं बिहान सबेरै जानु पर्छ। तपाईं 6: 00 बाट कियोमिजुदेराको परिसरमा प्रवेश गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईं बेलुका लाइट अप घटना हेर्न चाहानुहुन्छ भने, यो एकदमै भीडको बीचमा १ 18::30० उज्यालो अप सुरु भए पछि, त्यसैले म तपाईंलाई २०:०० पछि जान सिफारिस गर्दछु।
किन भने कियोमिजुदेरा पहाडको भित्तामा अवस्थित छ, यातायात सुविधायुक्त छैन। सामान्यतया यो बस प्रयोग गर्नु उत्तम हुन्छ, तर शरद पातहरूमा यो भीड हुन्छ। यदि सडक भारी जम्मा भएको देखिन्छ भने, यो किहिम ट्रेनको कियियोमिजु-गोजो स्टेशनबाट हिंड्न छिटो हुन सक्छ। यो स्टेशनबाट कियोमिजुदेरा मन्दिर सम्म पुग्न लगभग २० मिनेट छ।
मियाजीमा मा शरद Momतु, मोमीजी उपत्यका पार्क = शटरस्टक
सेन्जोकाकू मन्दिर भित्र, मियाजिमा टापु, जापान = शटरस्टक
मियाजीमा टापुको नक्शा
हातोसिमा प्रान्तको हत्सुकाइची शहरको मियाजीमा टापु विदेशी पर्यटकहरूमाझ एकदमै लोकप्रिय छ, साथै क्योटोको फुशिमी इनारी ताइशा तीर्थ र कियोमिजु मन्दिरको साथ। मियाजीमा शान्त सागरमा रहेको सानो टापु हो, जहाँ जापान प्रतिनिधित्व गर्ने पुरानो मन्दिर रहेको छ, इटुकुशिमा तीर्थ। महासागरमा एक ठूलो Torii धेरै प्रभावशाली छ। जे होस्, यदि तपाईं शरद Miतुमा मियाजीमामा यात्रा गर्नुहुन्छ भने शरद leavesतुका पातहरू सम्झन नबिर्सनुहोस्। मियाजीमामा, त्यहाँ एक सुन्दर शरद leavesतु पातहरू पार्क छ जसलाई "मोमीजी-दानी" (मोमीजी उपत्यका) भनिन्छ। यस पार्कमा करिब 700०० नक्शा छन्। किनभने शरद पातहरूको समयमा यो धेरै भीडले भरिएको छ, यदि सम्भव भएमा बिहान पार्कमा जाऔं। शरद पातहरूको शिखर मध्य नोभेम्बरदेखि नोभेम्बरको मध्यसम्म हुन्छ।
यस बाहेक, म तपाईंलाई सिफारिश गर्दछु कि मिय्याजिमाको सेन्जोकाकू (आधिकारिक नाम होक्को श्रीइन हो)। जिन्कगोका ठूला रूखहरू विशाल काठको भुइँबाट हेर्दै धेरै सुन्दर छन्।
>> मियाजिमा विवरणका लागि कृपया आधिकारिक वेबसाइटमा हेर्नुहोस्